NENWE ACHỤLAWO NDỊ NCHỊ EHI – hoo!haa!!
Madụ agaghị anọ be ya were nọpịa ihe ya. Ya mere ndị Nenwe dị n’okpuru ọchịchị Aninri nke Enugwu Steeti jiri pụta n’igwe were chụlaa ndị Fulani ndị nchị ehi nakwa ehi ha karịrị otu puku ha chịrị wakpo ndị obodo ahụ n’isi ụtụtụ taa.
Site n’ozi hoo!haa!! nwetara ndị Fulani a jiri ihe dịka elekere ise nke ụtụtụ were chịrị ehi ndị a wuchie. E nweghị onye ma ebumnobi ha mere ha ji chịrị igurube ehi ruru otu a were tinye isi n’otu obodo. O nweghị onye ma ma ọ bụ ụgbọala butere ha.
Ihe doro anya bụ na ha n’ehi ha si ụlọ ụzọ awara awara nke si Enugwu gaa Port Harcout were bara Nenwe. Ha sotikwara were gawa Agbada-Nenwe.
Oriakụ Ụzụma Aliejim, onye hoo!haa!! gbara ajụjụ ọnụ kwuru sị :”Ka anyị hụrụ igurube ehi ndị chị na-abata be anyị, ụzụ akwa pụrụ anyị nile n’ọnụ maka na ha ga-ala ihe nile anyị tara ahụhụ kụọ n’ugbo n’iyi. Ma ahụekere, ma ọka tinyekwara ọkwụrụ.
” Ọ teela ehi ha ji emebisi akụkụ anyị kọrọ n’ụgbọ. Onye kwuo okwu, ha eyie ya egwu”
Ka ndị inyom na-eti ị mkpu akwa n’isi ụtụtụ ahụ, ụfọdụ na-ajụzị ma e nwere ozu e buletara. Ka achọpụtara ihe na-eme ndị obodo ahụ kụzịrị ekwe onye ọbụla pụta óbódó, ma nwoke ma nwanyị, ma nwata ma okenye. Igwe madu pụtara kariri otu Narị n’iri ise.
Ka a kụrụ ekwe ahụ, ọnụmara nile dị n’agbata-Nenwe jupụtara, ma ndị Okpome ma ndi Emulemoke ma ndị Amẹgụ. Tupu ha ji agbakọtacha, ndị nchị ehi a achịrịwo ehi ha ruo Ugwu Tank na-abanyezi ime ọhịa.
N’agbanyeghị na ha ejighị egbe ọbụla, ọnụ ọgụgụ nakwa otu sa siri kaa obi mere ndị nchị ehi a ji chee ihu ebe ha chere azụ.
Onye sịrị na igwe abụghị ike? Igwe mmadụ ndị Agbada-Nenwe chụrụ ndị nchị ehi a nakwa igurube ehi ha chụpụ na be ha. Ha akwụsịghị ebe ahụ kama ha dugidere ha dupu ha n’ụzọ awara awara esi abata Nenwe.
Mgbe ha gafetere ụlọ ọrụ ndi Uwe ojii dị n’ebe ahụ ndị uwe ojii pụtazịrị soro duru ndị Fulani a were pụwa ụzọ awara awara.
Omenka Onyemaechi Kalụ bụ odeakwụkwọ ukwu otu Nenwe Improvement Union ma bụrụkwa onye Agbada-Nenwe katọkọwara ya bụ mwakpo ndị nchị ehi nakwa ehi ha wakporo ndị be ha.
“Ọ teela anyị ji ekpesa maka etu ehi ndị Fulani si emebisi akụkụ anyị kọrọ n’ụgbọ mana mkpesa anyị nile anaghị amịta mkpụrụ ọbụla. Ihe ka njọ bụ na ha bịazịrị mgbe ndị be anyị ka na-achọ ịmalite owuwe ihe ubi.
Mazị Kalụ rịọkwara ndị be ha ka ha ghara iji aka ike so ndị nchị ehi a kama ka ha gbaa mbọ kpesara ndị uwe ojii mgbe ọbụla ha mebiri ihe ha.
Ọ kọwakwara na ọ bụ akwa arịrị ndị inyom ha kwara metụrụ ndị be ha n’obi ha jiri were chụlaa ndị Fulani nchị ehi a wakporo ha.
hoo!haa!! ka na-agakwa n’ihu ịrịọ Ndigbo ka onye ọbụla kee nkwụcha maka na nkwụcha abụghị ụjọ. Ọzọkwa, obodo ọbụla kaa obi maka na anyị agaghị eji ụjọ daara enwe n’elu
Previous Post: AFENIFERE:WERENU ỌTỤMỌKPỌ CHEWE ONWE UNU N’AKA NDỊ FULANI
Next Post: ANA EHIWELA OTU NHAZI “COAL-CITY HOMECOMING 2019”